Saturday March 16, 2019 - 11:14:49 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ninkii fuliyay weerarkii bahalnimo ayaa faafiyay waxa uu ka tarjumayo weerarka oo gabigiisa ku meeraysanayay sidii dadka muslimiinta ah looga saari lahaa qaaradda Yurub, ka hor intii uusan weerarka fulin ayuu baraha internetka ku faafiyay qoraal dhowr Page ka kooban oo uu ku sheegayo in uu muslimiinta gummaadi doono.
Brendon Tarant oo ah Ninka gummaadka ugu daran ugeystay muslimiinta New Zealand ayaa qoraallo uu ku dul qoray hubkii uu dadka ku laayay wuxuu ku muujiyay halka uu salka ku hayo dagaalka u dhaxeeyo muslimiinta iyo gaalada wuxuu soo hadal qaaday Macrakadii Vienna ee ay ku hakadeen futuuxaadkii dowladdii islaamiga Cuthmaaniyiinta ee dhanka qaaradda Yurub xilligaas oo saliibiyiintu ahaayeen kuwa weeraro kala kulmayay muslimiinta.
Sidoo kale gaalka muslimiinta ku laayay wadanka New Zealand ayaa qoraalka uu hubkiisa ku qoray wuxuu ku xusay macrakadii Buwaatiyeeh ama Balaadu shuhaddaa ee dhacday sanaddii 114-kii Hijriga ee muslimiintu ay damceen in ay ku furtaan wadanka hadda loo yaqaan Faransiiska wuxuuna qoraaladiisa ku bidhaaminayay sida uu soo jireen u yahay siraaca udhaxeeya gaalada iyo muslimiinta.
Brendon Taran ayaa soo qaatay magaca Nin sanaddii 2017 dad muslimiin ah ku laayay masjid kuyaal magaalada Kibeek ee wadanka Canada iyo Nin kale oo isna dad muslimiin ah ku dilay wadanka Sweden ee qaaradda Yurub.
Weeraradan oo ahaa kuwa mantaana ah ayaa ka kala dhacay laba Masjid oo kala ah Al Nuur iyo Lindwood balse dhimashada ugu badan waxay ka dhacday masjidka Al Nuur oo ah isku imaatinka ugu weyn ee muslimiintu ku leeyihiin wadanka New Zealand.